musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Nyowani CEO Anotora Helm KuVail Resorts
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kirsten Lynch kugadzwa semukadzi wechikadzi CEO wevail Resorts
Lynch akabatana neVail Resorts muna 2011 semukuru wekushambadzira uye akambobata zvigaro zvehutungamiriri muPepsiCo neKraft Foods.
Kirsten Lynch, Iyezvino Chief Marketing Officer, kuti agadzwe ave mukadzi wechikadzi CEO uye Nhengo yeBhodi yeVail Resorts
Rob Katz, iye zvino mukuru webasa weKambani, achasarudzwa sachigaro mukuru webhodhi.
Rob Katz acharamba achishanda zvizere uye achipinda muVail Resorts 'sarudzo dzakakosha uye zvakakosha.
Ryan Bennett, parizvino mutevedzeri wemutungamiriri wezvekushambadzira, achanzi mukuru wekushambadzira weVail Resorts.
Nhoroondo ye Vail Resorts, Inc. nhasi yazivisa kuti Kirsten Lynch, mukuru weKambani wekushambadzira, achasarudzwa semukuru uye akasarudzwa kubhodhi revatungamiriri veKambani, kutanga kwaNovember 1, 2021.
Panguva iyoyo, Rob Katz, iye zvino mukuru webasa weKambani, achadomwa sachigaro mukuru webhodhi uye acharamba achishingaira uye achibata muVail Resorts 'sarudzo dzakakosha uye zvakakosha. Pamusoro pezvo, panguva iyoyo, Ryan Bennett, parizvino mutevedzeri wemutungamiriri wekushambadzira, simudza mari, achanzi mukuru wekushambadzira weVail Resorts.
Lynch akabatana Vail Resorts muna 2011 semukuru wekushambadzira uye akambobata nzvimbo dzehutungamiriri hwepamusoro pa PepsiCo uye Kraft Foods. Lynch inhengo yebhodhi revatungamiriri veStitch Fix, Inc., uye muna 2019, akatumidzwa zita kuForbes 'CMO Inotevera runyorwa, inozivikanwa semumwe wevatungamiriri makumi mashanu-ekushambadzira vatungamiriri. Lynch akakurira muChicago, kutanga kwechikepe aine makore matanhatu iye zvino Vail Resorts-yaive yeWilmot Mountain. Parizvino anogara muBoulder, Colorado nemurume wake nevana vaviri.
"Pamusoro pemakore gumi aine Kambani, Kirsten anga achiona nezvekushandurwa nekubudirira kweVail Resorts 'dhizaini inotungamirwa nedhiraivhira uye mutyairi wekukura kweKambani, kugadzikana uye kugadzira kukosha," akadaro Katz. “Kuwedzera pakuva nehunyanzvi hwebhizimusi hunoshamisa, Kirsten ndemumwe wevatungamiriri vane hushamwari, vanofambisa basa randakamboshanda navo. Kushingairira kwake kukuru kwehupenyu husingaperi hwemutambo wedu uye kuzvipira kwakanyanya mukusimudzira hutungamiriri mukati mekambani yedu kuchaita iye mutungamiri akasarudzika weVail Resorts. Kirsten achakomberedzwa nechikwata chakasimba uye chakasimba. ”
"Iropafadzo kutungamira Vail Resorts seMukuru uye kuvaka pamusoro penhaka yaRob yekufungidzira chiitiko chemugomo," Lynch akadaro. “Ndine shungu neCompany iyi, tsika yehutungamiriri yatakavaka nevashandi vedu makumi mashanu nemashanu vanoita Vail Resorts mutungamiri weindasitiri. Ndichitarisira kumberi, ndiri kufara pamusoro pemikana inoshamisa yekukura kweVail Resorts uye ndakazvipira kuita mutambo wedu neKambani yedu kuve akasiyana, anosanganisira uye anowanikwa. Pamwe chete, tichakudza bhizinesi redu, titsvage nekuenderera mberi nekushandira chinangwa chedu chekugadzira chiitiko cheHupenyu Hwose kuvashanyi vedu nevashandi. ”
Ulcerative Colitis: New Healing Therapy Yakaendeswa ...
Vashanyi veIndia vanofanirwa kutsvakwa zvakanyanya